विशेषताहरू - Getcontact
हाम्रो प्राथमिकता तपाईंको सुरक्षा हो। हरेक दिन, हामीले सम्भावित धोखा र स्प्याम कलरहरू पत्ता लगाउन हजारौं कलहरूको विश्लेषण गर्छौं। हामी दुर्भावनापूर्ण संख्याहरू रोक्न तपाईंलाई सुरक्षित राख्ने लक्ष्य राख्छौं।
यो तपाईंलाई कसले कल गर्दैछ जान्ने तपाईंको अधिकार हो! तुरुन्तै तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा अज्ञात कलरको पहिचान गर्न जान्नुहोस्।
एउटा राम्रो च्याट अनुभवको लागि Getcontact Messenger पुरा गर्नुहोस्! भर्खरै डेभलप गरिएको च्याटहरूको सुविधाहरूले हामीले तपाईंलाई उन्नत गोपनियता सहित एउटा च्याटको अनुभव प्रदान गर्दछौं।
आईफोनको लागि सर्टकटहरू
तपाईंको फोनमा कल इतिहासमा जानुहोस्।
तपाईंले अधिक जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुभएको नम्बरको विवरणहरू हेर्न "I" आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्।
नम्बरको विवरणहरूबाट "सेयर सम्पर्क" चयन गर्नुहोस्।
यदि Getcontact विकल्प स्क्रिनमा उपलब्ध छैन भने, कृपया "थप" ट्याप गर्नुहोस् र Getcontact लाई सक्षम गर्नुहोस्।
अब तपाईंले Getcontact अनुप्रयोग नखोलि आफ्नो कल इतिहास मार्फत कलहरूलाई पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
कसैसँग व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको विश्वाश अङ्क खोज्नुहोस्! हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स प्रविधि प्रयोगकर्ताका ताजा प्रतिक्रिया, स्प्याम गतिविधि र दर्जनौं फरक खालका अल्गोरिदमले संचालित छ र हामी यो प्रविधि प्रयोग अग्रेर प्रत्येक व्यक्तिको विश्वास अङ्क हिसाब गर्छौं ।
Getcontact ले यसको बल हाम्रो प्रयोगकर्ता समुदायबाट संलग्नताको स्तरबाट पाउँछ। प्रयोगकर्ताहरूले कलरहरूको प्रमाणिकरण गरि "ट्याग थप्नुहोस्" विकल्प मार्फत सम्पर्कहरूको प्रमाणीकरण गरि प्रोफाइल डेटाबेसलाई सुधार गर्दछ।
उदाहरणको लागि, एक प्रयोगकर्ताले अर्को प्रयोगकर्ता प्रोफाईललाई "इलेक्ट्रियसियन" जस्ता ट्यागको साथ सम्बद्ध गर्न सक्छ। यो ट्याग बनाउने प्रयोगकर्ताले ट्यागलाई परिमार्जन गर्ने वा हटाउने क्षमता हुन्छ।
डेटा सुरक्षा र गोपनीयता
प्रयोगकर्ताहरूको गोपनियता सुरक्षित गर्नु Getcontact को लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामी GDPR को बेन्चमार्क अन्तर्गत उच्च स्तरको प्राविधिक र संचालनका अनुपालन उपायहरू कायम गर्छौं । त्यसैले हामीले पूर्ण रूपमा समर्पित गोपनियता व्यवस्थापन केन्द्रको विकास गरेका छौं ताकी तपाईंले आफ्नो प्रोफाइल र गोपनियता प्राथमिकताहरूको पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्नुहोस्, जहाँ तपाईंले सजिलै आफ्नो दृश्यता सेटिङहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, ट्याग र प्रोफाइल देखावट संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सम्पर्क प्रोफाइल हटाउन वा सूचीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ र अन्य धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ...
Getcontact तपाईंको मोबाइल फोन जस्तै तपाईंको डेस्कटप कम्प्यूटरसँग मिल्दो छ।
खोज्न web.getcontact.com मा जानुहोस्।